तारिखमा अल्झिएको मेलम्ची
दुई दशक अघिसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा पिउने पानीको खासै समस्या थिएन । त्यसबेला यहाँ बसोबास गर्ने जनसंख्या सीमित रहेको र ठाउँ ठाउँमा ढुङ्गेधारा, इनारको समेत व्यवस्था गरिएकाले पानीको समस्याबाट सर्वसाधारण आहत हुनु परेको थिएन । तत्पश्चात् दु्रत गतिमा शहरीकरण बढ्दै जानु, प्रत्येक वर्ष हजारौँको संख्यामा गृह निर्माण गरिनु र पुराना ढुङ्गेधारा, स्रोत पनि सुक्दैजानु आदिका कारण यो समस्या चुलिँदै गयो । सरकारले समस्या निराकरणका लागि विभिन्न पहल नगरेको होइन, दातृराष्ट्र र अन्य सङ्घ संस्थाले पनि यस कार्यमा सहयोग पु¥याउँदै आए तर पिउने पानीको समस्या समाधान हुनुको साटो प्रतिवर्ष चुलिँदै गयो । खानेपानी संस्थानले पनि समस्या समाधानका लागि विभिन्न क्षेत्रमा वितरित पानीमा कटौती गर्दै लग्यो । त्यसबेला दैनिक बिहान बेलुकी उपलब्ध गराइने पानी सुरुमा दिनको एक पटक गर्दै अहिलेको अवस्थामा कुनै क्षेत्रमा हप्ताको २÷३ घण्टा उपलब्ध गराइन्छ भने अन्य कुनै क्षेत्रमा दश बाह्र दिनको अन्तरमा धारामा केही समयका लागि पानी छाडिन्छ । खास गरिकन गर्मीयामका फागुनदेखि आषाढको दोस्रो हप्तासम्म काठमाडौँ उपत्यकाका केही क्षेत्रमा बाहेक यत्रतत्र पानीको हाहाकार भैरहेछ । यसले आम शहरबासीमा पारेको परिणाम अवर्णनीय छ ।
उपत्यकाबासीले पानीको सास्ती बेहोर्न नपरोस् भनी वि.सं. २०४८ सालमा मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने परियोजना तयार गरियो । यस खुशीयालीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याई सडक सफा गर्ने उद्गार व्यक्त गर्नुभएको थियो तर उहाँले आफ्नो जीवनकालमा मेलम्ची काठमाडौँ आएको हेर्न पाउनु भएन ।
मेलम्ची खानेपानी परियोजना वि.सं. २०५२ सालमा प्रारम्भ गरिएता पनि आजसम्म सो पानी सुन्दरीजलस्थित रिजरभ्वायरमा पु¥याउन सकिएको छैन । सुरुका दश वर्षमा माओवादी द्वन्द्वका कारण परियोजनाको निर्माण कार्यले गति लिन सकेन । तत्पश्चात् नियुक्त गरिएका ठेकेदारले पनि सम्झौता अनुरूप कार्य गर्न सकेनन् र एक पछि अर्काे ठेक्का तोडियो । पछिल्लो समयमा इटालियन कम्पनीले यो कार्य गरिरहेको छ । सुरुङको जम्मा लम्बाई २७,५८३ मिटर रहेकोमा २०७१ असोज मसान्तसम्म ८,९२७ मिटरको कार्य सम्पन्न गरियो । यस राष्ट्रिय गौरव परियोजनाको कार्यविवरण सार्वजनिक गर्न सरकारले प्रत्येक महिनाको १ गते राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका गोरखापत्रको पहिलो पृष्ठमै छाप्ने व्यवस्था समेत मिलायो । यस क्रमले वि.सं. २०७१ र २०७३ मा निरन्तरता पायो । वि.सं. २०७२ मा भने महाभूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण कार्य अघि बढ्न सकेन । वि.सं. २०७३ फागुनसम्म आइपुग्दा झण्डै ८,७५० मिटर सुरुङ खन्ने कार्य बाँकी रहेको विवरण सार्वजनिक गरियो । यसबीच ठाउँ ठाउँमा नरम चट्टान भेटिएका कारण परियोजनाको कार्य द्रुतगतिमा अघि बढाउन नसकिएको जानकारी दिइयो । अहिले पाँचसय मिटर जति सुरुङ खन्ने कार्य बाँकी रहेको सार्वजनिक गरिएको छ ।
पछिल्लो समयमा आएर मेलम्चीको पानी राजधानी आइपुग्ने बारे सञ्चार माध्यममा विभिन्न समाचार छापिँदै आएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा समेत मेलम्ची पानीको विषय छाएको पाइन्छ तर सर्वसाधारणले यथार्थ समाचार प्राप्त गर्न सकेको देखिन्न । यसै सन्दर्भमा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फागुन १७, २०७३ का दिन राष्ट्रका नाममा गर्नु भएको सम्बोधनमा “अबको ६ महिना अघि नै मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउनेछ” भन्नु भएको थियो तर सो अनुरूप कार्य भएन । त्यसपछि अर्काे मिति २०७४ को बडादशैँ तोकियो । यस सन्दर्भमा एकजना पाठकले १८ भाद्र २०७४ का दिन गोरखापत्रको पाठक आवाजमा यसबारे सोधिएको प्रश्नमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका सूचना अधिकारीले “सबै तथ्यहरूलाई विश्लेषण गरेर इमान्दारीपूर्वक जवाफ दिने हो भने काठमाडौँका धाराहरूमा मेलम्चीको खानेपानी आउन कम्तीमा सात महिना तथा बढिमा १० महिना लाग्ने देखिन्छ । यसबाहेक अन्य आपतकालीन अवस्था आइपरे भने यो समय अझै ढिलो हुन सक्छ । ” भनी जवाफ छपाइएको पाइयो ।
यसै सन्दर्भमा हाल बहालवाला मन्त्री श्री महेन्द्र यादवले भाद्र २०, २०७४ का दिन रिपोटर्स क्लबमा बोल्दै मेलम्चीको खानेपानी पुस भित्रै राजधानी आउने जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो पटक पुस २७, २०७४ का दिन गोरखापत्रमा छापिएको समाचार अनुसार आउँदो जेठ (२०७५) मा मेलम्चीको पानी राजधानी आइपुग्ने देखिन्छ ।
वर्तमान समयमा काठमाडौँ उपत्यकाका बासिन्दा पानीको अभावमा काकाकुल बनेका छन् । खानेपानी संस्थानले हप्ता दश दिनको अन्तरालमा उपलब्ध गराएको पानीबाटै सर्वसाधारणले आफ्नो गुजारा चलाइरहेछन् भने अन्य कसैले ट्याङ्करमार्फत पानी किनिरहेछन् । पानीको धनी देशको राजधानीमै पिउने पानीको यस्तो अवस्था सिर्जना हुनेछ भनी सरकार, योजना आयोग र सम्बन्धित निकायले विगतमा खासै ध्यान पु¥याएको देखिएन । यस पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तेह्रौँ त्रिवर्षीय योजनाको अन्तसम्मा देशका ८३.६०% जनसंख्यालाई पिउने पानी पुगेको र चालु चौधौँ त्रिवर्षीय योजना (२०७३।७४–२०७५।७६) मा यो प्रतिशत ९० पुग्ने भनी गरिएको प्रक्षेपणलाई कति विश्वस्त ठान्ने ?
विगतमा उपत्यकावासीले पानी जस्तै विद्युत् आपूर्तिमा पनि समस्या झेल्नु परेको यथार्थ जगजाहेर छ । हिउँदका महिनामा दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ बेहोर्नु परेको थियो । दशौँ वर्षसम्म प्राधिकरणका केही पदाधिकारीहरूको कथित व्यापारीसित संलग्नताका कारण सर्वसाधारणले यो दुःख भोग्न बाध्य हुनुप¥यो । वि.सं. २०७३ मा विद्युत् प्राधिकरणमा नयाँ नेतृत्वको चयनसँगै यो गठबन्धनको पर्दाफास मात्र भएन कि जनताले लोडसेडिङको हैरानी नै बेहोर्नु परेन तर विडम्बना आजपरन्तु त्यस्ता षडयन्त्रमा संलग्न व्यक्तिलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन सकिएको छैन । यसको उत्तर आमनागरिकले सम्बन्धित संवैधानिक आयोग, न्यायालय र स्वयं सरकारबाट खोजिरहेछन् ।
यता आएर मेलम्चीको पानी वितरण हुनेबारेको एकिन तिथि मिति नतोकिनुमा कतै यस आयोजनाले पनि विद्युत् प्राधिकरणकै पूर्व नियति अनुसरण गरिरहेको त छैन भन्न प्रश्न समेत उब्जाएको छ । पानीको व्यापारमा संलग्न हजारौँ ट्याङ्करका मालिकहरूले यो परियोजना सकेसम्म लम्बियोस्, यसको कार्यान्वयनमा विघ्न बाधा आइरहोस् भन्ने कामना गरेको सुनिन्छ । यसको अर्थ आफ्नो स्वार्थका लागि उनीहरू विद्युत् प्राधिकरणकै नियति नअपनाउला भन्ने छैन । यसबारे पनि सम्बन्धित सबै चनाखो रहनु आवश्यक छ ।
पछिल्लो समयमा आएर गत वर्षको प्रारम्भदेखि नै मेलम्ची खानेपानी परियोजनाका लागि ग्राहकको घरमा पानी पु¥याउने उद्देश्यले पाइप बिछ्याउने, धारा जोड्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । मेलम्चीमा सुरुङ खन्ने कार्यलाई समेत समानान्तर रूपमा अगाडि बढाइएकोले यस राष्ट्रिय गौरव परियोजनाका बारेमा अब धेरै शंका लिनु आवश्यक देखिन्न । अतः मेलम्ची खानेपानी परियोजना र नेपाल खानेपानी संस्थानले संयुक्त रूपमा यसबारेको सत्य तथ्य सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनै पर्दछ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना आफैँमा वृहत् छ । पहिलो चरणमा यसले रिङरोड भित्रका बासिन्दालाई मात्र पानी वितरण गर्ने योजना बनाएको बुझिएको छ । दोस्रो चरणमा अतिरिक्त स्रोतबाट समेत पानी ल्याई उपत्यकाका तीनै सहरमा पानी वितरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा सम्पन्न गर्नु पर्दछ ।
यस परियोजनाको कार्य प्रारम्भ भएपश्चात् उपत्यकाबासीको दैनिकी धेरै सहज हुनेछ । पानीको अभावमा सर्वसाधारणले भोग्नु परेको दुःखकष्टको मात्रा अवर्णनीय छ । स्वस्थकर जीवनका लागि सरसफाइको विज्ञापन जे जति गरे पनि त्यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध पानीसित जोडिन्छ । विद्यमान अवस्थामा उपत्यकाबासीले पिउने गरेको पानीको गुणस्तरमा समेत नयाँ परियोजनाको कार्यान्वयन सँगै वृद्धि हुने अपेक्षा राखिएको छ ।
बिजुली र पानीको महìव आफैँमा स्पष्ट छ । समाजमा हुने खाने र हुँदा खानेको उपस्थिति सदा रहिरहन्छ । बिजुली, पानीको अभावमा समाजका हुँदा खाने समुदाय सर्वथा पीडित हुन पुग्दछन् । पानीको अभावमा सफा रहन नसक्ने, सफा रहन नसकेमा रोगी बन्ने आदिको दुश्चक्रबाट पनि उनीहरू नै बढि प्रभावित बन्न पुग्दछन् । मेडिकल डाक्टरहरूले सुझाए अनुसार स्वच्छ पिउने पानीको सहाराले आधा रोग निर्मूल गर्न सकिन्छ ।
मेलम्चीको खानेपानी सहज वितरणसँगै उपत्यकामा बिजुलीको खपत पनि धेरै घट्ने देखिन्छ । वर्तमान समयमा नेपाल खानेपानी संस्थानले वितरण गरेको पानी अधिकांश ग्राहकका घरमा मेशिन नजोडी प्राप्त गर्न सकिन्न । संस्थानले पानी छाडेका समयमा तोकिएको क्षेत्रमा उपभोक्ताले प्रयोगमा ल्याएको मेशिनको आवाजबाटै यसबारे बोध गर्न सकिन्छ । मेलम्चीको पानी आएपछि कुनै पनि उपभोक्ताले मेशिन जोडेर पानी तान्नुपर्ने अवस्था नरहने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
मतदाताले हालै सम्पन्न निर्वाचनमा दिएको जनादेश अनुरूप केही हप्ता भित्रै वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित छ । यस सरकारका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यतालिकामा मेलम्ची परियोजनाको उद्घाटन कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता राखी देशमा विकास र समृद्धिको शंखनाद गर्नु पर्दछ ।